Ukutshala iplamu | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukutshala iplamu
Ukukhula imbewu ehlukanisiwe
I-catarantus ekhanyayo futhi ekhangayo ingabonakala njengesici sokuhlobisa kwangaphandle kwemifula evulekile nama-verandas, ku-design landscape, kanye nomhlobiso wekhaya lakho noma i-ofisi yangaphakathi. Lezi "ezicacile, ezihlanzekile", ezihunyushwe kusuka esiGrekini, izimbali zibukeka kahle, zidinga ukunakekelwa okuncane futhi zilungele ukuthokoza ngobuhle bazo cishe unyaka wonke.
I-Cherry plum Ukufaneleka nokunakekelwa okufanelekile
I-Cherry plum iyisihlahla esincane, noma ngisho nesitshalo esiyithokozisa ngezithelo ezimuncu, ophuzi noma obomvu obomvu, usayizi omncane. Uhlala enikeza isivuno esihle kakhulu, futhi akunzima ukumnakekela. Kulesi sihloko sizokutshela indlela engcono yokunakekela ama-cherry plums, mayelana nezinkinga zokutshala nokuvikela i-cherry plum emva kokutshala.
Ukulima kweKuban Comet I-cherry plum: izici ezihlukile ezihlukahlukene, ukutshala nokunakekelwa
Izitshalo eziningi zasendle namuhla zikhulile ngempumelelo ezindaweni ezingaphansi kwe-suburban. Ezinye zazo ziba umhlobiso omuhle wensimu, kuyilapho ezinye zitshalwa ukuze zikhiqize izithelo ezihlwabusayo nezempilo. Lezi zinsuku kufanele zifakwe, futhi zifake zonke izinhlobo zazo eziningi. Amajikijolo ahlanzekile yalesi sitshalo afanele ukupheka ama-compotes, amakhemikhali, amakhemikhali kanye nezinye izitsha eziningi okumnandi.
Imithetho yokwakheka komqhele kalamula: indlela yokusika isitshalo ekhaya?
"De Barao Red" - umhlobiso wesakhiwo sakho nomkhiqizo ophezulu wezotamatisi
I-Herbicide "i-Agritox": isithako esisebenzayo, isisindo sezenzo, indlela yokuhlunga
Indlela yokucubungula ama-droppings yenkukhu futhi yini le manyolo efanelekayo?
Isizathu sokuthi umhlaba ugcwele ukuqhakaza okumhlophe, kukhona isikhunta, i-midge kanye nephunga elimnandi kusuka ebhodweni
I-Zemklunika Merchant - i-hybrid yezitshalo ezimbili eziyizigaxa engadini yakho
Indlela yokutshala nokukhula ukhukhamba